VaMnangagwa Votaura Nhasi Kekutanga kuUnited Nations General Assembly
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nhasi manheru vari kutarisirwa kutaura kekutanga kudare reUnited Nations General Assembly, asi mashoko avo ari kutarisirwa kuti anenge akasiyana zvikuru neaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe avo vainge vaine mbiri yekutuka nyika dzekunze zvikuru America neBritain pamagungano aya.
Asi VaMnangagwa vari kutarisirwa kukurudzira nyika dzakaita seAmerica nedziri musangano reEuropean Union kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa ivo nevamwe vakuru vemuhurumende yavo.
Asi vamwe vakuru kubva kusangano reAfrican Union vataura neStudio 7 vanoti kubva zvakabviswa VaMugabe pachigaro, nyika dzichiri kubudirira dzarasikirwa nezwi rakasimba raikurudzira kuvandudzwa kwedare reUnited Nations Security Council iro rine nyika shanu chete dzakabudirira.
Asi AU yakatambira hayo kubviswa kwaVaMugabe pachigaro nemauto muna Mbudzi gore rapera.
Kunyangwe hazvo VaMnangagwa vari kuti Zimbabwe yave kutora rimwe gwara munyaya dzezvematongerwo enyika, vanopikisa vanoti hapana chanyanya kuchinja sezvo vanopikisa vari kuramba vachibatwa neseri kweruoko vachisungwa nekumbunyikidzwa kodzero dzavo.
Nhasi mangwanani VaMnangagwa vari kutarisirwawo kupinda mumusangano wekudzivirira kuroodzwa kwevana vasati vabva zera.
Zvichakadaro, kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyu, VaMnagagwa nezuro vakaita musangano nemunyori mukuru weUnited Nations VaAntonio Guterres, mutungamiri wehurumende yeBelgium VaCharles Michel, uye vatungamiri venyika yeSwitzerland.